Liis dhamaystiran oo 50 Music Goobaha durdurka Music Online
Music waa sida xawaash to our nolosha. Oo waxaa maalmahan, dadka u muuqdaan in ay iyaga qulquli online si toos ah. Weli baadi agagaarka goobaha music weyn in ay dhagaystaan ​​music online? Halkan waa article one-stop ah oo aad la siinayo goobaha music 50 iyo waxaad isku dayi kartaa iyaga dibadda si aad u hesho adeegga ugu fiican ee aad u. Amarka ka mid ah goobahan waxaa go'aamiya ay caan goobta, taasoo ku muuqata in darajo Alexa ah.
Platform Mobile Available: Android, macruufka
Captivate iyo naftaada unwind dhagaysto, kuwaas oo qabow music heeso iyo in play music Google ku siin kara in aad. Waxaad ka heli kartaa heeso qabow oo cusub adigoo booqanaya Google Play Music.
Tag this site >>
Platform Mobile Available: Android, macruufka, Windows phone
Naftaada Xooji in ay dhagaystaan ​​oo heli qabow music iyo heeso iyada oo booqanaya YouTube ka. Waxaad ka arki kartaa oo dhan coolest videos music iyo qaybaha kala duwan ee heesaha. Waxaad hubaal jeclaan lahaa in ay booqdaan YouTube ah.
Yahoo uusan kaliya ku siin ma macluumaadka aad u baahan tahay, waxay kaloo ku siin karaan heeso wanaagsan iyo qaybaha kala duwan ee music. Dhageysiga qaybaha kala duwan ee music hubaal ka dhigi kara maskaxdaada iyo jirkaaga ha nastaan.
SoundCloud ayaa xaqiiqo ah jeclaan lahaa inuu ku siiyo oo dhan ugu dambeeyey, markii songs jecel jir ah oo dhan iyo music. Naftaada iyo habayn Xooji in si SoundCloud in la helo heesaha oo dhan aad jeceshahay sung by artist aad ugu jeceshahay.
Ma leedahay song uu jecel yahay iyo fannaaniin? Markaas waa in aad habayso in si Pandora, Pandora weyn noqon lahayd in aad bixiso oo dhan iyo heeso music ah oo dhan fanaaniinta aad jeceshahay iyo guutooyin.
Iyahoo iyo unwind maskaxdaada iyo jirkaaga dhagaysto Deezer. Deezer ayaa xaqiiqo ah ku siin kara oo dhan heeso iyo muusig, taasoo ka dhigi kartaa in niyadda hab wanaagsan.
Ku bilow adiga oo maalin firfircoon, xaq iyo waxyoonay iyada oo dhagaysiga muusigga ee ay bixiyaan GrooveSark. GrroveShark waxay noqon wpuld weyn si aad ugu faraxsanahay oo siinaya heesaha oo dhan aad ugu jeceshahay.
Calan aad niyadda wanaagsan oo lagu dhagaysto oo booqanaya MySpaceMusic ah. Naftaada Xooji oo dhan music qabow iyo wanaagsan in xad gelin karaa dhoola in wejigaaga. Waxaad lahaa, sida xaqiiqada jecel booqanaya radio this online.
# 9. Madaxweyne Siilaanyo Oo Music
Naftaada Fascinate oo dhan heeso wanaagsan iyo qaybaha kala duwan ee music iyada oo booqanaya Music Madaxweyne Siilaanyo ka. Waxaad hubaal jeclaan lahaa in ay booqdaan shabakadda internet radio.
Waxa uu dareensan yahay sida aad jannada ku jira iyo haddii aad awoodin inay maqlaan dhamaan gabayadii wanaagsan in aad u jecel iyada oo booqanaya Spotify ah. Tani radio online aad ku xoojiya sidii ay abuuri karto playlist gaar ah.
Mobile Platform Available: Android, macruufka, phone Windows, Blackberry
U oggolow naftaada samayso mid kuu gaar playlist music dhex Tunein ah. La soco hadda si Tunein in ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan in ay hubaal ka dhigi karaan in aad dhoolacadeyn. Sidaas, habayn ee hadda oo wuxuu ku raaxaysan heesaha oo dhan aad rabto in aad maqashaan.
Ma waxaad u jecel muusiga? Markaas waa in aad soo booqato Last.fm ah in ay dhagaystaan ​​oo dhan heeso iyo music in aad rabto in aad maqashaan. Hubaal wouls Waxaad jecel Last.fm sababtoo ah waxa ay ku siin karaan heesaha oo dhan, taasoo ka dhigi kartaa niyadda galay mid ka mid wanaagsan.
Dhagaysiga muusigga ee ay bixiyaan Bandcamp hubaal ka dhigi karaan in aad dhoolacadeyn iyo maalin bilowdo. Naftaada Xooji in ay dhagaystaan ​​oo ay daawadaan oo dhan videos music in aad jeceshihiin.
# 14. Boor
Ha jirkaaga iyo maskaxdaada u leeyihiin fasax ay ka qayladii diiqayo iyo aad u hesho dhammaan gabayada iyo heesaha oo ka dhigi kartaa in aad isku dejiso. Waa inaad u habayn inay boor ah.
U oggolow naftaada ku faraxsan dhagaysto heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo fanaaniinta. AllMusic ayaa aad awood karaa in ay dhagaystaan ​​oo ay abuuraan playlist ka mid ah heesaha oo dhan aad ugu jeceshahay.
Mobile Platform Available: macruufka
Ma waxaad tahay qof taageere aad u xiiseeya ee qaybaha kala duwan ee muusiga? Markaas waa in aad soo booqato Beatport in la abuuro kuu gaar ah playlist online ah heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo music. Waxaad hubaal raaxaysan lahaa radio online taasi Beatport.
Naftaada iyo awood ahaan boosaska badan oo ku saabsan sida aad u abuuri kartaa playlist gaar ah oo isticmaalaya iHeart qabow. IHeart waxay ku siin karaan awood ay ku raaxaystaan ​​oo dhan heeso aad jeceshahay iyo qaybaha music.
Ku rid dhoola in wadnahaaga iyo wajiga ay ka qabi karto in 8tracks ah. 8tracks ayaa hubaal ka dhigi karaan in aad dhoolacadeyn idinka siiyey awood u leh in aad playlist u gaar ah.
Isticmaalka Mixcloud ee hubaal ka dhigi karaan niyadda hab aad u wanaagsan. Dhegayso iyo heesaha oo dhan aad jeceshahay adigoo isticmaalaya Mixcloud u arkaan. Waxaad hubaal raaxaysan lahaa isticmaalaya Mixcloud ah.
Ma run ahaantii jecel muusiga? Markaas waa in aad habayn iyo isticmaali SiriusXM ah. SiriusXM ayaa yara aad awood kartaa in la abuuro playlist gaar.
Waxay leeyihiin nasasho ka daalo iyo caajis joogtada ah nolol maalmeedka taasi oo ka isticmaalaya Jango ah. Jango ayaa ku siin kara heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo music.
Ku dar midabka iyo ambiance wanaagsan in aad meel taasi oo ka qabi karto in Rdio ah. Iyada oo Rdio aad ka heli kartaa oo ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo music.
Ma rabtaa in aad ka dhigi ambiance ee ka dhacay hab aad u wanaagsan oo iftiin? Markaas waa in aad laxan ku DI.fm si ay u dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo qaybaha music.
Fascinate iyo naftaada unwind taasi oo ka dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo music dhex Shoutcast ah. Waxaad hubaal jeclaan lahaa radio this online sababtoo ah waxa ay ku siin karaan heesaha oo dhan in aad dhab ahaantii jeclahay.
Ku bilow adiga oo maalin midig dhagaysto heesaha oo dhan ugu jecel yahay iyo qaybaha of music dhex Live365 ah. Waxaad hubaal raaxaysan lahaa radio online tan maxaa yeelay waxa ay sidoo kale u ogolaataa user ay u wadaagaan iyo boostada isaga ama iyada music jecel.
Samee maalin maalin aad u wanaagsan oo ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo videos music. Raac oo dhan songs ugu dambeeyay ee fanaaniinta aad jeceshahay iyo guutooyinkiisa oo dhex Sogza ah.
# 27. Machine arrinka
Machine Hyper ayaa hubaal ka dhigi karaan in aad hyper oo firfircoon. Maalinta Waa in aad bilowdo midig 'reebi in Machine Hyper The.
Waxaad hubaal raaxaysan lahaa Radio sababtoo ah waa radio online in sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala badan oo boostada iyo wadaagaan heeso iyo noocyo ka mid ah music jecel ay. Dadka music lover hubaal jeclaan lahaa radio this online.
Naftaada raaxeysan oo dhan heeso wanaagsan iyo music coolest in hubaal ka dhigi kara maalinta dhamaystiran. Is dejiya oo unwind inta aad dhagaysanayso heesaha oo dhan aad jeceshahay adigoo isticmaalaya Rhapsody ah.
EMusic ayaa hubaal ka dhigi kartaa dhoolla caddayntaada aad qalbigiinna iyo wajiga, sababtoo ah waxaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan oo ay wadaagaan heesaha oo dhan in xad ka dhigi kartaa inaad ku faraxsan. Dadka jecel noocyada iyo qaybaha kala duwan ee muusiko ah, sida xaqiiqada ah uu jeclaan lahaa in ay isticmaalaan eMusic ah.
Naftaada ula dhaqmaan oo ay dhagaystaan ​​oo dhan songs favosite iyo music dhex Slacker.com ah. Tani radio online saamaxaya kuwa isticmaala badan si ay u abuuraan oo ay playlist oo wadaagto dadka kale.
Ma waxaad u jecel in aad dhegaysato qaybaha kala duwan ee muusiko ah markaa waa in aad isticmaasho Radio AOL ah. Waa radio online ah in la hubo u ogolaan kartaa in aad ka dhigto playlist u gaar ah. Waxaad hubaal jeclaan lahaa radio this online.
Marna ha ka maqnaan music ee arrimuhu dambeeyay. The Music Beats hubaal kaa caawin karaan inaad hesho track oo dhan coolest oo cusub heeso hubaal in aad jecel yihiin inay maqlaan.
Ka helay maalin aad u caajis? Kalsoonow, kac, oo naftaada ku raaxeysan ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo fanaaniinta iyada oo radio Stereomood internetka. Tani waa radio online in hubaal ka dhigi kara maalinta dhamaystiran.
Waxay leeyihiin nasasho ka caadiga ah lagu caajiso maalin kasta nolosha. Dhoola saar si aad u fool dhagaysto heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo fanaaniinta. Ex.fm waa bixiye music online iyo radio online in xad ku siin kara heesaha oo dhan in aad rabto in aad maqashaan.
# 36aad MOG
Unwind iyo nasato ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo daawashada cajaladaha music qabow la isticmaalayo MOG ah. MOG ayaa hubaal ka dhigi kara maalinta saxda ah. Haddii aad tahay lover music ah markaa waa in aad isticmaasho MOG ah.
Ma waxaad tahay qof keli ah oo caajisin? Kac oo u dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay adigoo isticmaalaya RadioTuna ah. RadioTuna waa bixiye online radio iyo music u ogolaanaya user si ay u abuuraan oo ay playlist u gaar ah.
Platform Mobile Available: N / A
Raac iyo track marnaba gaartay gabayadii ugu dambeeyey oo coolest. Waa in aad iftiimin aad maalin adigoo booqanaya Blip.fm. ah Blip.fm The xad ku siin kara updates ku saabsan heeso cusub ah fanaaniinta aad jeceshahay iyo guutooyin.
Ma sida samaynta playlist gaar aad? Haddii ay sidaas tahay, markaas waa in aad isticmaasho Playlist.com ah in ay dhagaystaan ​​oo heli updates ku saabsan gabayadii ugu dambeeyey oo videos music in aad rabto in aad hesho.
# 40. Kanu waa Jam
Jam la Kanu waa Jam. Naftaada iyo awood u hesho update ku saabsan gabayadii ugu dambeeyey ee fanaaniinta aad jeceshahay iyo urur. Waxaad lahaa, sida xaqiiqada jecel booqday Kanu waa Jam.
Codka wanaagsan saar si aad nolosha iyada oo ka qabi karto in Beemp3 ah. Beemp3 The xad ku siin kara oo dhan heeso iyo music wanaagsan in aad rabto in aad hesho. Sidaas, ee aad tahay lover music ah markaa waa in aad soo booqato Beemp3 ah.
# 42. MP3 O
Mobile Platform Available:
Hel Entertainment iyo indulgement adigoo booqanaya 22Tracks ah. By booqanaya 22Tracks ka dibna aad updates ugu dambeeyey ee ku saabsan heeso cusub oo ka sarreeyey ciidankii aad jeceshahay oo artist ka heli kartaa.
Soo hel Raaxo iyo naftaada nasato ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad ugu jeceshahay. By booqanaya Shuffler.fm aad ka heli kartaa heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo in la abuuro playlist gaar.
Adkaan caajisnimada iyo in aan dareemayo caajisaan adigoo booqanaya Whyd ah. Iyada oo la adeegsanayo dhagaysto heesaha oo dhan jecel iyo music aad naftaada ku raaxeysan kartid. Dad badan ayaa lahaa, sida xaqiiqada jecel isticmaalaya Whyd ah.
Baro wanaagga iyo u hesho madadaalo iyada oo booqanaya Musicovery.com ah. Musicovery.com ayaa xaqiiqo ah ku siin kara heesaha oo dhan aad jeceshahay oo aad hesho updates ku saabsan fannaaniinta aad ugu jeceshahay.
Ka bax Xaggeeda dareemayaa cidlo iyo caajis. Naftaada ula dhaqmaan oo ay dhagaystaan ​​heesaha oo dhan aad jeceshahay iyo qaybaha kala duwan ee music isticmaalaya FrateMusic ah. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u abuuraan playlists iyaga u gaar ah.
Marnaba ma dareemi doonaa cidlo iyo caajis haddii aad isticmaalayso TheSixtyOne. Waxaad ka heli kartaa hubaal farxad taasi oo ka isticmaalaya radio this online. Waxa kale oo ay ku siin karaan warar cusub oo ku saabsan heeso aad jeceshahay iyo fanaaniinta.
# 48aad Aupeo
Mobile Platform Available: Android, macruufka, phone Windows, Symbian
Heeso aad jaceshahay ay sugayaan kaliya aad u. Adiga iyahoo karaa iyadoo qofka la isticmaalayo Aupeo ah. Aupeo ayaa xaqiiqo ah kuugu maaweelin karo adiga oo lagu siinayo awoodda in la sameeyo si ay u dhagaystaan ​​heesaha aad ugu jeceshahay.
Soo hel updates ugu dambeeyey ee ku saabsan heeso aad jeceshahay iyada oo WiMP ah. WiMP ayaa yara caawin karaan in aad si aad u hesho heesaha oo dhan aad ugu jeceshahay. Dadka music lover waa in ay isticmaalaan WiMP this.
Ka ilaali naftaada dhiirigeliyeen ay dhagaystaan ​​heesaha aad jeceshahay iyo qaybaha music. Hubaal MP3songs ayaa ku siin kara oo dhan songs in aad doonayay in ay gaaraan lacag la'aan ah.
> Resource > Music > Top 50 Music Goobaha durdurka Music Online